ग्राहकका कस्ता कस्ता माग ! यौनकर्मी महिला पनि छक्क पर्छन् - pnpkhabar.com
You are at:Home»बिबिध»ग्राहकका कस्ता कस्ता माग ! यौनकर्मी महिला पनि छक्क पर्छन्
ग्राहकका कस्ता कस्ता माग ! यौनकर्मी महिला पनि छक्क पर्छन्
By रिता घिसिंग on ६ माघ २०७४, शनिबार ०७:२५ बिबिध
वास्तवमा यौनकर्मी महिलाहरु दैनिक रुपमा नयाँ नयाँ खतराको सामना गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई कस्ता कस्ता खतरा आइपर्दछन् त ? यसको अनुमान लगाउन पनि गाह्रो पर्छ । वेश्यालयमा कस्ता कस्ता ग्राहक आउँछन् र उनीहरुका माग कस्ता हुन्छन् ?